China 3D Maso Popper mitsingevana manjono Popper Bait Hard Popper Lure orinasa sy mpanamboatra | Lake Lake
3D Maso Popper mitsingevana manjono Popper Bait Hard Popper Lure
2.Lure Type: Popper Hard Bait
Ny hazandrano dia tsy manana hazavana, fitaovana hita taratra, taratry ny hazavana ao anaty rano izy io, ary ny tsiranoka ao anaty trondro dia toa ny vavonin'ireo trondro.
Ao anaty rano 10 metatra dia manintona manokana ilay fantsona mitsoka
Ny maodely vaovao rehetra dia novokarina tao amin'ny toeram-pivoarantsika misy ny rafitra "CAD" solosaina.
2.Manao lasitra prototype
Ny milina fanapahana dia manapaka ny bobongolo ho azy avy amin'ny angona CAD.
3. Prototype sy fitsapana
4.Mamboatra lasitra vy
Manamboatra lasitra vy amin'ny alàlan'ny milina fanapahana metaly mandeha ho azy miaraka amina teknika be pitsiny.
5.Manaova vatana plastika sy fivoriambe
Manamboatra vatana plastika, avy eo mampiasa milina fantsom-panafody izay mampiasa teknolojia onjam-peo supersonic hanambatra ny vatana.
6. hosodoko sy hijerena
Ny mpanakanto dia manolotra am-baravarana ny lokony tsirairay tsirairay avy, farany, mijery ny kalitaony izahay. Avy eo atsofokay ireo peratra, farango ary maso miparitaka.
Dalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd. dia orinasa iray mampiditra R&D, famolavolana, famokarana ary ny varotra. Manana traikefa mahomby efa ho 10 taona amin'ny varotra an-tserasera izahay. Ny vokarinay dia amidy tsara any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eropa, Aostralia, Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra hafa.
Ankehitriny, ny vokatray lehibe dia ahitana: jono plastika, maunu vy, maunu spinner, shrimp squid, sticking glow sticks and other..Fitaovana famokarana mandroso, matihanina r & D ekipa, ka izahay amin'ny indostria dia samy mifaninana amin'ny vidiny sy ny vokatra.
Ny fampiroboroboana vokatra vaovao dia asa lehibe ho anay. Na inona na inona endrika manokana sy loko, dia afaka manamboatra azy izahay mandra-pahafapo anao amin'izany. Omeo serivisy OEM
Amin'ny fanomezana kalitaon'ny vokatra tsara kokoa, dia mitazona hatrany ny vidiny amin'ny ambaratonga mifaninana amin'ny mpividy izahay, mba hanana fotoana sy tombony bebe kokoa eo amin'ny tsena.
Fanaraha-maso kalitao sy fanamarinana
Ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao matotra dia hijery ireo vokatra alohan'ny fandefasana, ao anatin'izany ny fanamarinana ny hamandoana, ny lesoka, ny fandisoana diso, ny fonosana sns sns ao anatin'ny vokatra. Fanamarinana ny ISO, SGS, CE, RTS, sns.
Fonosana sy famoahana
Fonosana :Fonosana fanondranana mahazatra, na arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Fandoavana: TT / Paypal / Antoka ara-barotra sy ny sisa
Làlana fanaterana: Amin'ny ranomasina na amin'ny alàlan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny UPS / DHL / TNT / FEDEX sns
Teo aloha: 7CM / 10.4G Fanjonoana Fanjonoana Fanjonoana 5 Colony Hard Plastika Bait Luminous Minnow
Manaraka: Fivarotana Newup mitsingevana 7CM / 8G 9CM / 13G Fanjonoana Bait Popper Fishing Lure Hard Lures
1. Azoko atao ve ny manana ny vidin'ny vokatrao?
Tongasoa. Aza misalasala mandefa mailaka aminay eto. Hahazo ny valinteninay ao anatin'ny 24 ora ianao
2. Azontsika atao ve ny manonta ny logo / tranokalanay / anaran'ny orinasa amin'ny vokatra?
Eny, mba atoroy azafady ny habeny sy ny kaody Pantone an'ny sary famantarana.
3. Inona ny fotoana itarihana ny filaminana ara-dalàna?
7-10 andro ho an'ny volavolan-dalàna ambany noho ny 1000pc; Ho an'ny habetsahana bebe kokoa, matetika 20 andro
4. Afaka mahazo fihenam-bidy ve aho?
Eny, ho an'ny vidin'ny filaminana tokana mihoatra ny $ 1000, azafady mifandraisa aminay mba hahazoana ny vidiny tsara indrindra.
5. Mandinika ny vokatra vita ve ianao?
Eny, ny dingana tsirairay amin'ny famokarana sy ny vokatra vita dia hivoaka fanaraha-maso ataon'ny departemanta QC alohan'ny fandefasana.
1. Mpanamboatra matihanina ny hazavan'ny jono izahay, ary manana traikefa fanondranana mihoatra ny 20 taona.
2. Ny vokatray dia amidy amin'ny firenena sy faritra maro eto amin'izao tontolo izao, kaonty ny 1/5 amin'ny fizarana tsena manerantany.
3. Izahay no orinasa voalohany namolavola ny raikilan'ny vokatra, amin'ny laharam-pahamehana eo amin'ny indostria, azo antoka tanteraka ny kalitao.
4. Manana ny patanty marika sy marika famantarana anay izahay. Manohana ny fanodinana namboarina ihany koa izahay.
5. Ny tombom-barotra kely dia ny fitsipiky ny famokarana orinasa.
Fanjonoana amin'ny jono
TSILIVA-PIVERENANA CUSTOMER News
9cm 10,68g jono manjono Wobbler mafy plastika 6 ...
Ny jono dia manjono mafy Baibo VIB Metal Bait Sea Fish ...
Fitaovana trondro maro karazana fitarihan-trondro Minnow Bait ...
Zavakanto vaovao marobe fizarana 10cm / 15.61g ...
Mpanamboatra jono pensily
Ambongadiny avo lenta 10.5CM 13.67G Fizarana H ...